गीत गाएर विश्व कीर्तिमान राख्ने ध्याउन्नमा राज्यमन्त्री मानन्धर - Kohalpur Trends
गीत गाएर विश्व कीर्तिमान राख्ने ध्याउन्नमा राज्यमन्त्री मानन्धर
९ पुस, काठमाडौं । सांसद विघटन र पार्टी विभाजनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरु तनावग्रस्त छन् । तर, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई भने यतिबेला अर्कै चटारो छ । उनी स्टेजमा गीत गाएर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने ध्याउन्नमा छन् ।
‘मैले वर्ल्ड बुक रेकर्डमा नेपालको तर्फबाट कीर्तिमान राख्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्टेजमा एकल सांगीतिक प्रस्तुति दिने पहिलो बहालवाला मन्त्रीको रुपमा मेरो नाम रहनेछ ।’
५–६ अगाडिदेखि नै यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए । सन् २०२० भित्रै गरिसक्नुपर्ने भएकाले अहिलेको राजनीतिक तनावका बीच पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको मानन्धरको भनाइ छ । उनको कार्यक्रममा निशुल्क प्रवेश पाइनेछ । स्टेजमा उनले करिब ४ घन्टा प्रस्तुति दिनेछन् ।
Previous Previous post: तनहुँका कोरोना संक्रमित पुरुषको पोखरामा मृत्यु
Next Next post: धानको उत्पादन ७० हजार मेट्रिक टनले बढ्यो
Magh _09_ 2077
The submit Magh _09_ 2077 appeared first on Nepalgunj News. Source link Share via:0More
राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएका न्यौपाने डिल्लीबजार कारागार चलान
८ माघ, बुटवल । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपाने कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत भक्तपुरले मागेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी…
प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न : आफ्नै छोरीज्वाइँलाई मात्रै हेर्ने ? (भिडियोसहित)
८ माघ, काठमाडौं । नेकपा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका छोराछोरीलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै छोरीज्वाइँलाई मात्रै हेरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन् ।…
पत्रकार हुँ भन्नेवित्तिकै फलानो पार्टीको हो भनोस् : प्रधानमन्त्री
८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पित पत्रकारिता देशको ठूलो समस्या भएको बताएका छन् । अहिले केही सञ्चार माध्यम ‘राम्रो कुरा देख्न पर्छ…